Fepetra vaovao hiadiana amin'ny Coronavirus any Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Fepetra vaovao hiadiana amin'ny Coronavirus any Ankara
21 / 03 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, PHOTOS, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
Misy fepetra vaovao hiadiana amin'ny coronavirus amin'ny harona
Ny kaominina ao Ankara Metropolitan dia manohy ny tolona mavitrika ao an-drenivohitra amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra vaovao hanoherana ny valan'aretina coronavirus. Raha toa ny Halk Bread Factory dia manatsara ny fomba fidiovana eo amin'ny toerana fivarotana, indrindra any amin'ny faritra famokarana, dia manatanteraka ny dingan'ny famonoana otrikaretina amin'ny fiara fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bahoaka, taxi sy minibus, ary ireo serivisy C Plate. Ny Ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanambara fa hiara-hiasa amin'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ny Kaominin'i Metropolitan mba hizara sakafo ho an'ny biby an-dalambe mba hahazoana ny fihenan-tsakafo mihena noho ny fanakatonana ny kafe sy ny trano fisakafoanana.
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia manohy ny asany 7/24 ao anatin'ny faritry ny ady amin'ny areti-mifindra manerana ny renivohitra.
Noho ny fipoahan'ny coronavirus, ny singa rehetra dia manatsara ny fomba fidiovana eo an-toerana eo ambany fandrindran'ny Ivontoerana fitantanana ny krizy ary koa mampiditra fepetra sy fepetra vaovao.
FIKOROHANA MAMA MBA HANANA FIVAVAHANA
Ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanambara fa nanomboka nizara sakafo niaraka tamin'ny fikambanana tsy miankina ao amin'ny kaominina Metropolitan izy ireo niaraka tamin'ny kafe sy trano fisakafoanana izay mifanaraka amin'ny filan'ny biby an-dalambe manohitra ny loza ateraky ny areti-mifindra.
Vondron'ny vondron-tsarintany ao amin'ny Sampana ao Ankara Metropolitan, Mustafa Şener, izay nilaza fa niverina tany amin'ny toerana misy ny kaontinanta, izay nitahiry ireo olom-boafidy niverina tao amin'ny Campus Gölbaşı izay nampiantrano ny biby very lalana tao amin'ny Gölbaşı Shelter, kaominina ao amin'ny Distrika Metropolitan.
“Nisy birao krizy izay noforonina teo ambany fiahian'ny governemantan'ny Ankara. Mifanaraka amin'ny fangatahan'ny Biraon'ny governoranay, dia nitondra ny biby 16 nalemy tao amin'ny faritra marihazo izahay, ho any amin'ny toeram-ponenanay miaraka amin'i Gölbaşı Munisipaly ary ao anatin'ny fahalalana ny mpilatsaka an-tsitrapo, mba hialana amin'ny olan'ny fahasalamana, indrindra ny sakafo, satria tsy afaka miditra any ivelany ny mpirotsaka an-tsitrapo. Ny fizahana ara-pahasalamana dia notanterahin'ireo vazaha ny anay raha vao tonga ny bibinay. Nivolinkitranina ny fahenina amin'ny biby 16 nidina. Nifandray tamin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo nijery ireo biby tany amin'ny faritra izahay. Ny mpirotsaka an-tsitrapo dia afaka tonga amin'ny fotoana rehetra hamahanana ny biby ao amin'ny tranom-piterahana ary mahazo fampahalalana momba ny toe-pahasalamany. Aorian'ny fanesorana ny quarantine dia haverina any amin'ny tontolo izay nitondrany azy ny biby fiompinay. Tsy tokony hanahy momba izany ny zanakay biby, dia salama tsara ny biby ary tsy misy ny olana amin'ny famahanana azy ireo. Nanomboka nizara sakafo koa izahay. ”
Ny filohan'ny vondrom-piarahamonina voajanahary sy ny fiarovana amin'ny biby ao Ankara Hacı Bayram Veli dia nilaza i Damla Karaboya fa: "Taorian'ny fanambarana ny toerana misy ny valan-jaza dia nafindra tany amin'ny fialofana Gölbaşı. Tamin'ny voalohany dia nanatona miadana izahay, fa izao dia afaka mahita ny sakaizanay any Gölbaşı Animal Shelter. Tsy misy ny olana. Na dia tena tsara aza ny lanjan'izy ireo ary salama tsara ny fahasalamany, "hoy i Tenay Yücel, mpitia ny biby mpilatsaka an-tsitrapo," efa an-taonany maro no nandeha tamin'ity fialofana ity aho. Ao amin'ity trano fialofana ity dia ny fiainana sy ny sakafo an'ny fanahy foana. Ovaina novana matetika. Ny vaksiny dia atao tsy tapaka, vita ny dingana fanadiovana. Rehefa avy nandray andraikitra ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Mansur Yavaş dia tsara kokoa ny raharaha. Ireo izay tsy hitanao eto dia miteny amin'ny fomba hafa sy tsy mety. Milamina tsy azo antoka eto ny fanahintsika. Salama tsara ny fiainantsika eto. Tsy misy tokony hanahy. ”Naneho ny heviny izy.
INDRINDRA NY HALY INDRINDRA INDRINDRA
Ny Ankara Halk Bread Factory dia nampitombo ihany koa ny fepetra hisorohana azy amin'ny coronavirus any amin'ny fivarotana izay famokarana ny mofo sy ny mofo, indrindra ireo amin'ny fivarotana fivarotan-tsakafo, ny harona sy ny kitapo Halk Bread.
Halk Bread Factory, izay namoaka ny drafitry ny hetsika fanarenana vonjy taitra, dia nanomboka nandrefitra ny tazo misy hafanana isan'andro isan'andro amin'ny fandraisana an-tanana ny mpiasa rehetra. Halk Ekmek, izay nampitombo ny isan'ny otrikaretina ary nandefa sary fampitandremana tamin'ny teboka mihidy, dia voatery manao ny saron-tava sy ny fonon-tanana. Halk Ekmek, izay manidy ny kafe ao amin'ny fivarotana varotra, nanomboka nampihatra ny fitsipika 1 metatra ho fiarovana ny elanelana ara-tsosialy ho an'ny fivarotana vokatra isan'andro.
Raha nilaza izy ireo ho laharam-pahamehana ho an'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sakafo ara-pahasalamana, nanambara ny mpitantana ny Halk Ekmek Recep Mızrak fa nandray fepetra hentitra izy ireo
“Nanomana zavatra 23 misy fepetra izahay. Namorona tabilao krizy vonjy maika izahay hanamboarana ny fangatahana. Hatramin'ny niasa 3 ny fiasan'ny famokarana, dia mandrefy ny hafanan'ny vatana miasa ao amin'ity fiovana ity isika amin'ny fotoana hiasana. Tao amin'ny teboka fidiovana dia nitondranay ny filana voaroaka mpamono bibikely, fonon-tànana ary saron-tava. Nisintona tsipika mavo izahay tamin'ny elanelan'ny 1 metatra mba hiarovana ny elanelana ara-tsosialy ao amin'ny tranombarotra Sales. Amin'izany fomba izany, miezaka miaro ny halaviran'ny olom-pirenentsika izahay. ”
DISINFECTION dia nanomboka tamin'ny C-PLATE SERVICE VEHICLES
Ny filazan'izy ireo fa nitombo avo roa heny ny fidiovana sy ny fanadiovana mifandraika amin'ny coronavirus nanomboka tamin'ny andro voalohany raha ny filazan'ny Kaominaly Ankara Metropolitan, sampan-draharaha misahana ny fahasalamana Seyfettin Aslan, ny fiara fitateram-bahoaka dia iharan'ny asa isan'andro.
Ny fanambarany fa mandoto ny fiara fitaterana piringanana C izy ireo taorian'ny lalamby, ANKARAY, Cable Car, Buses ary taxi-be ary minibus, hoy i Aslan, "Manohy ny fanadiovana sy ny famonoana otrik'aretina amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra izay ampiasaina ny 7/24. Nihaona taminay ny filohan'ny Chambermen'ny Craftsmen an'ny Operation Vehicle Fanomezana Ankara ary nanangana foibe iray izahay. Aorian'izany, rehefa tonga any afovoany ny fiara fitaterana C plate rehetra, dia hatao ny famonoana mitohy. Ny Talen'ny departemantan'ny fitaterana no hanome asa mandrindra amin'ity olana ity. Amin'ny maha Metropolitan, dia miezaka izahay hanatanteraka ny ezaka ataonay ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka 7/24 ”. Ny lehiben'ny departemanta misahana ny fitaterana ao Ankara Metropolitan Ali Cengiz Akkoyunlu dia nanamarika ihany koa fa ny fiara ara-barotra miasa eo amin'ny andraikitry ny Kaominin'i Metropolitan dia mitohy ny tsy fahitana 7/24, "Fihetsiketsehana 10 7 tapitrisa, isan'izany ny minibus ary taxi-varotra. Rehefa vita ny fihanaky ny otrikaretina 300 17 eo ho eo, fiara XNUMX XNUMX no hodiovina. ”
Tuncay Yılmaz, Filohan'ny Chades of Tradesmen of Operations Vehicle Service Ankara, dia nanondro ny maha-zava-dehibe ny fandinihana disimpikansy izay nataon'ny Kaomina Metropolitan, "Izahay dia eo amin'ny sehatra iray izay mitondra mpiasa sy mpiasa ary mpiasam-panjakana ao an-tanàna, ary be mpandeha amin'ny maraina sy hariva isika. Ny fomba hialana amin'ity loza ity dia amin'ny alàlan'ny disinfection sy ny fanadiovana. Raha ny hevitr'izany, ny Kaominina Metropolitan dia manome antsika 7/24. Misaotra betsaka. ” Raha ny mpamily serivisy C plate İbrahim Aydirek dia nisaotra ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş, hoy i Fatih Yıldız, "Te-hisaotra ny kaominin'i Ankara Metropolitan aho noho ny serivisy. Fanadiovana sy famafazana tokony tokony ho izy io ”.
MISAOTRA HO ANY NY TRANO NA TAXI ARY ATAO FARANY
Manompo eo ambanin'ny sampana miaro ny tontolo iainana sy ny fanaraha-maso, BELPLAS A.Ş. Ny ekipa mpanadio dia manohy ny fihanaky ny otrikaretina amin'ny taxi sy minibus isan'andro, amin'ny torolalana nataon'ny Ben'ny tanàna Mansur Yavaş Ankara Metropolitan.
Raha eo ambany fifehezan'ny ekipan'ny Departemantan'ny polisy i Orhan Taşcı, izay miasa ao amin'ny gara seranam-piaramanidina, dia miasa i Orhan Taşcı, izay miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Airport, hoy izy: "Misaotra ny ben'ny tanàna ao Ankara Metropolitan izahay noho ny fanohanan'izy ireo. Faly izahay miasa amin'ny fanapotehana ny fiara ataontsika. Izahay dia zarainay amin'ireo mpandeha eto amintsika. Ny mpandeha dia afaka mampiasa ny fiaranay amin'ny fiadanan-tsaina. ” Hasan Hakan Tağluk, Filohan'ny Birao Esenboğa Taxis Photographers Cooperative koperativa, dia nilaza fa: "Mandray soa avy amin'ity fampiharana ity izahay amin'ny fanohanan'ny Kaominintsika Metropolitan. Izahay dia mahazo valiny tsara momba ny asa avy amin'ireo mpandeha ataontsika. Tianay fa hitohy ireo fanadihadiana ireo. Tianay ny fisaorana ny ben'ny tanàna Mansur Yavaş noho ny fanohanan'izy ireo. ”
Rıfat Çetinkaya dia nilaza fa manompo eo amin'ny fijanonan'i Sincan Dolmuş izy ireo ary nilaza hoe: "Nodimandry avokoa ny fiara rehetra napetray. Tiako ny misaotra ny munisipalintsika sy Andriamatoa Mansur Yavaş noho ny serivisy. ”Hoy ireo mpamily minibus izay nandray soa tamin'ilay serivisy:
Niyazi Bilgiç: “Te hisaotra ny filoham-pirenena Mansur Yavas izahay noho ity tolotra nomen'ny kaominina ity. Manantena izahay ny fitohizan'ny serivisy. ”
Feyzullah Kızıltaş: "Misaotra betsaka amin'ny kaominina eto amin'ity serivisy ity."
Taburlu fanomezana: “Misaotra ny tanànanay noho ny fikarakarana ireo olana ireo. Manohy ny fanompoana izahay amin'ny fomba mahasalama. ”
DAHOLO VAOVAO FARANY
Ny Kaominin'i Metropolitan, izay nanatsoaka ny tsy maha-fanavakavahana tamina andrim-panjakana maro sy fikambanana tsy miankina amin'ny fikambanana dia nandray fepetra manaraka ireto manoloana ny loza mahatsiravina:
Ny "Fire Brigade Exams" nambaran'ny Kaomina Metropolitan tamin'ny 30 martsa fa nambara fa ekena ny fangatahana ary hatao eo anelanelan'ny 13-17 aprily, nahemotra amin'ny daty taty aoriana.
Noho ny fihenan'ny isan'ny mpandeha amn'ny mpivarotra mampiasa ny Bus Public Public (ÖHO) sy ny Fiara Public Transport Vehicles (ELV) miasa any Ankara, dia nihemotra nandritra ny 2 volana ny fahazoan-dàlana mitaky ny fahazoan-dàlana sy ny vidin-tsofina.
Tamin'ny 4 martsa 23, ny tranoben'ny munisipaly Ankara Metropolitan, izay misy olona 2020, ankoatry ny fahazoan-dàlana amin'ny asa fitantanana, dia niasa adidy mitovy ao amin'ny tranoben'ny EGO sy ASKİ Jeneraly, ao anatin'ny ambaratongan'ny fepetra noraisina manohitra ny valan'aretina coronavirus sy ao amin'ny Tale jeneralin'ny Vondron'ny Metropolitan, EGO ary ASKI mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpiasa. dia hiasa miaraka amin'ny rafitra fiovàna mankany amin'ny baiko faharoa mba hahazoana antoka fa fanatanterahana ny serivisy ho an'ny daholobe tsy misy fanelingelenana.
Ny fangatahana fanampiana ara-tsosialy vaovao any amin'ny kaominina dia atao mandritra ny fotoana fohy amin'ny alàlan'ny laharan-tariby mifandray ((0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 ary (0312) 507 37 00) fa tsy ilay Food Aid Center hisorohana ny vahoaka hamorona sy hanaparitaka ny virus.
Asa fanaovan-gazety: TÜVASAŞ Recruitment of Workers Injured
Nihena ny làlan-dranomandry, nijanona tao am-pianarana ny mpiara-dia tamin'ny ady amin'ny lanezy
Ny fitaovana manokana dia ampiasaina raha ilaina ao anatin'ny ady amin'ny tombony
Fampandrenesana momba ny tolona amin'ny làlan'ny làlan'i Kayseri-Sivas-Kars
Hafanam-po haingana amin'ny ady amin'ny ala any Izmir
Ahoana ny fiantraikan'ny tetikasa Marmaray amin'ny fitaterana sambo? Inona no fepetra fitandremana?
Ny İBB 17 dia nandray fepetra manokana momba ny fitaratry ny fifamoivoizana izay mety hitranga amin'ny volana Septambra
Fanadiovana Coronavirus ao amin'ny Kocaeli Intercity Bus Terminal